फेक रेस्क्युले गर्दा अन्तराष्ट्रिय पर्यटन बजारमा नेपालकै बदनाम - पर्यटन तथा घर जग्गा ब्यबसायी छेटुप तामाङ | SaraKhabar.com
काभ्रे तिमाल स्थायी निवासी छेटुप तामाङ्ले स्थानीय पन्च कन्या मा. बि. मा एसएलसी सकाएर क्याम्पस अध्ययन गर्ने सिल सिलामा बि.स. २०५४ सालमा काठमाडौँ प्रवेश गर्नु भएको थियो । राजधानीको आर. आर. क्याम्पसबाट मेजर अंग्रेजी, राजनीति शास्त्र र पत्रकारिता बिषय लिएर मानविकी संकाय तर्फ आइ. ए. सम्मको पढाइ सकाउनु भएको तामाङ्ले क्याम्पस अध्ययन संग संगै फ्रेन्च भाषाको एडभान्स कोर्स समेत पुरा गरिसकेको र तत्कालिन किशोर सिङ् राठौरले नेतृत्व गरेको ने. बि. संघको संगठनमा सक्रिय हुनुहुन्थ्यो । तामाङ् बिगत २० बर्ष देखि पर्वतीय पर्यटन व्यवसायमा संलग्न भइ सफल पर्यटन व्यवसायी हुनुको साथै हाल घर जग्गा व्यवसायमा पनि संलग्न हुनुहुन्छ । उहाँ अल्टिच्युड रान्दोने ट्रेकिङ् प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक तथा युरोसेन्जेन नेपाल रिएल स्टेट एण्ड कन्सल्टेन्ट प्रालिका अध्यक्ष समेत हुनुहुन्छ । भारत, फ्रान्स, इटाली, स्पेन, स्विस, ग्रिस र अमेरिकाको भ्रमण गरि सक्नुभएको तामाङ् व्यवसाय संग संगै राजनीति र समाजसेवामा पनि उतिकै सक्रिय भइ बरिष्ट पर्यटन ब्यबसायी दिपक महत नेतृत्वमा रहेको कांग्रेस समर्थित लोकतन्त्रबादीहरुको संगठन नेपाल पर्यटन व्यवसायी संघका उपाध्यक्ष, राष्ट्रिय पर्यटन पत्रकार संघ - नाटोजका केन्द्रिय सल्लाहकार, साना तथा मझौला ब्यबसायी महासंघको केन्द्रिय सदस्य र तिमाल बृहत खानेपानी उपभोक्ता समितिको उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ । उनै व्यवसायी तथा समाजसेवी तामाङ्संग व्यवसायिक, राजनीतिक र समसामयिक बिषय बस्तुमा केन्द्रित भइ सारा खबरकाे संवाददाताले गरेको संक्षिप्त अन्तरबार्ता :
छेटुप जी सन्चै हुनुहुन्छ ?
-हजुर सन्चै छु ।
आजभोलि तपाइँ पहिले पहिले जस्तो त्यति सारो पर्यटनको कार्यक्रम तिर देख्नु हुन्न नि ?
-पर्यटन सिजनल ब्यबसाय भयो र अफसिजनमा बेरोजगार जस्तो भएको र समय किन खेरा फाल्ने भनेर साइडमा अर्को केहि नया व्यवसाय गरौ भन्ने सोचले घर जग्गा व्यवसायमा हात हाले । नयाँ कम्पनि दर्ता प्रक्रिया, कार्यलय ब्यबस्थापन, कर्मचारी नियुक्ति, तालिम आदिले गर्दा लगभग ६ महिना जति ब्यस्त भए । त्यहि भएर पर्यटनको कार्यक्रम तिर आउन सकेन ।
पर्यटन व्यवसाय कस्तो चलिरहेको छ त ?
-भुकम्प र फेक रेस्क्युको नकारात्मक प्रचारले पहिले भन्दा धेरै खस्केको अबस्था छ ।
तपाइको कम्पनीको नाम पनि पर्यो कि फेक रेस्क्यु काण्डमा ? धेरै कम्पनीहरुको नाम मिडियामा आइरहेको थियो नि ?
-सर्बप्रथम फेक रेस्क्यु भनेको केलाई भन्ने म प्रष्ट पार्न चाहन्छु । हिमालमा पर्यटकलाई लेक लागेछ भनि त्रास देखाएर, कपालको चाया सुपमा मिसाएर या अन्य छेर पट्टा लाग्ने बिष खुवाएर कुनै कम्पनीको मालिक र पथ प्रदर्शक बीच गोप्य सेटिङ्गमा ठुलो पैसा कमाउने धन्दामा लागेर गर्ने रेस्क्यु फेक हो । एउटा हेलिमा ५ सिट हुन्छ । बिमा कम्पनीलाई ५ जना को बिल क्लेम गर्ने समेत कुरा आयो । तर पर्यटक दुर्घटनामा परेर, प्राकृतिक प्रकोप वा लेक लागेर बिमारी भो वा मृत्यु भो भने हामी कम्पनीले सम्बन्धित बिमा कम्पनीको मेडिकल डिपार्टमा कल गरेर हेलिको कोटेसन दिएर पेमेन्ट ग्यारेन्टी लेटर पठाएर रेस्क्यु गरेको अबस्थामा फेक हुन्न । मेरो कम्पनीमा यहि बैधानिक मात्र रेस्क्यु भयो फेक रेस्क्यु भएन । मैले नियतबश फेक रेस्क्यु गरेको भए १० बर्षमा जम्मा ५ जनाको रेस्क्यु भएको रेकर्ड छ । जहाँ सम्म लाग्छ धेरै कम्पनीको नाम मिडियामा आयो भन्ने कुरो सरासर यो फेक रेस्क्यु गर्ने २-४ वटा कम्पनीले आफु मात्र कारबाहीमा नपरोस र यो जघन्य अपराधमा नफसोस भनेर कुचेष्टा गर्दै मिडियालाई पैसाको प्रलोभनमा दुरुपयोग गरि अन्धधुन्ध समाचार लेख्न लगाइएको हो भन्ने शंका छ ।
अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रमा फेक रेस्क्यु काण्डले गर्दा पारेको प्रभाब कस्तो छ ?
-पुरै नकरात्मक, नेपाली पदयात्रा कम्पनि र हेली कम्पनीले पैसाको लागि यति सम्म हर्कत गर्ने रहेछ भन्ने परिसक्यो / कति पर्यटक डराएर पनि नेपाल आउन छोडिसक्यो । ट्राभल इन्स्युरेन्स दिन छोड्यो र पहिले ८० डलर पर्ने ट्राभल इन्स्युरेन्स २०० डलर पर्ने भए पछि विदेशमा रहेको होलसेल अपरेटर जसले नेपाल गन्तब्य सेल्स गर्थ्यो प्याकेज महँगो हुन गयो र प्याकेज समेत हटाउन बाध्य भयो ।
फेक रेस्क्यु अनुसन्धान गर्न सरकारले छानबिन समिति बनाएको छ । दोषीलाई कारबाही होला र ?
-समितिले देशको इज्जत सम्झेर गहन अनुसन्धान गरे दोषी कारबाहीमा पर्छ । पैसाको प्रलोभनमा परे ढाकछोप पनि गर्न सक्छ । त्यो हामीले हेर्न बाँकी छ ।
अब प्रसंग बदलौ, तपाइँ सफल पर्यटन ब्यबसायी किन घर जग्गा कारोबारमा लाग्नु भयो ?
-पर्यटन व्यवसायको सिल सिलामा ग्रिस र साइप्रसमा नम्बर १० मा पर्ने हाउजिङ्ग डेभलपर कम्पनीको मालिक संग चिनजान भयो जो साउदीको राजकुमारसंग पार्टनरशिपमा रियल स्टेट ब्यबसाय गर्ने रहेछ । जसको प्रतिनिधिहरु नेपाल घुम्न आयो । मलाई पनि ग्रिस घुम्न निम्तो भयो । त्यहि साइप्रस र ग्रिसमा रहेको कम्पनीको नाम नेपालमा मैले दर्ता गरे र सेवा शुरु गरे ।
अहिलेको अबस्थामा घर जग्गा ब्यबसाय ठप्प छ भन्ने बजारमा कुरा चलिरहेको छ । तपाइलाइ असर भएन ?
-होइन, म त नया ब्यबसायी पर्यो । मैले ठुलो लगानी गरेर कित्ताकाट नभएको ठुलो जग्गा किनेन या बैना मात्र हान्ने काम पनि गरेन । मैले बुझे अनुसार पहिले पहिले ठुलो जग्गामा लगानी गरेर कित्ता काट गरेर जग्गा बेचेर पैसा कमाउन पल्केका केहि ब्यबसायीहरु सधै यस्तै समय र कमाइ हुन्छ भनेर लोभमा पर्नेहरु सरकारले कित्ताकाट बन्द गरेपछि ठुलो चौपट्टामा परेका हुन् । कति त ऋणले डुबेर सडकमा आइसक्यो । बैना फिर्ताको मुद्दा लफडा धेरै समस्या छन् । अझै सरकारले कित्ताकाट खोलेन भने ऋण र बैनाको भरमा काम गरेको ब्यबसायीहरु धेरै सडकमा आउछन । मेरो कम्पनीको सवालमा हामीले बैना र ऋणको भरमा नभई नगदमा साथीहरु मिलेर सामुहिक लगानीमा धेरै सोच बिचार गरेर मात्र गर्छौ । त्यो पनि सरकारले दिएको मापदण्ड पुरा गरेर जस्तै २२ रोपनी माथि कम्पनीको नाममा र खेति अयोग्य जमिनलाइ कित्ताकाट हुन्छ ।
घर जग्गा कारोबार रिएल स्टेट कम्पनि मार्फत मात्र गर्न पाउने सरकारले ल्याएको नयाँ कानुन ब्यबहारमा लागु भएको छ र ?
-त्यो पटकै लागु भएको देखिन्न । सरकारले कानुन मात्र बनाएर हुन्न नि त्यसको अनुगमन र कारबाही पक्ष बलियो बनाउनु पर्छ । अहिले बजारमा खुल्लेआम कर नतिर्ने रियल स्टेट कम्पनि नभएका व्यक्तिगत दलालहरु बिना बिल बर्पाई कारोबार गर्छन, कमिसन थाप्छन र राजश्व छल्ने कामहरु भईरहेका छन् ।
तपाइहरुको पनि व्यवसायीक हक हितको लागि लड्ने सस्था घर जग्गा ब्यबसायी महासंघ छ भन्ने सुनेको के यो सस्थाले सरकारलाई दबाब दिन नसकेको हो र?
-म पनि यो व्यवसायमा नयाँ हुँ । सस्था छ भन्ने सुनेको पनि १-२ जना साथीहरुसंग भेट पनि भएको हो । तर खासै सरकारसंग सस्थागत तरिकाले कुनै माग भएको मैले थाहा भएन । शायद संगठित हुन नसकेर सस्थाको औचित्य नभएको हुन सक्छ ।
घर जग्गा व्यवसायमा देखेको समस्या, चुनौती र सम्भावना के छ ?
-समस्या त धेरै छन् । विदेशमा हो भने रिएल स्टेट लाइसेन्स भएको मान्छेलाई सबै भन्दा ठुलो मान मर्यादा हुन्छ । अहिले सम्म संसारमा धनि मान्छेहरु यहि व्यवसायबाट भएको देखिन्छ । हाम्रो नेपालमा नपढेका, परम्परागत र सबैले दलाल भनेर बोलाउदा पनि नरिसाउनेहरुले गरेको देखिन्छ । मानौ एउटा घर बेच्नु पर्यो । घर मालिकले त्यो घर सबै लाइसेन्स भएका कम्पनीहरु र लाइसेन्स नभएका दलालहरुलाई बेच्न लगाउछ । बिदेशमा हो भने एउटा मात्र लाइसेन्स रिएल स्टेटमा गएर सम्झौता गरेर घर मालिकले रिएल स्टेट कम्पनीको नाम र सम्पर्क नम्बर भएको बोर्ड राख्न लाउछ, बेच्ने अधिकार र कमिसन ग्यारेन्टी हुन्छ । यसलाई एक्सक्लुसिभ प्रोपर्टी भनिन्छ । यो बैधानिक किनबेचमा पर्छ । यहाँ नेपालमा त लथालिङ्ग रहेछ । न दलालहरुले प्रोपर्टीको राम्रो ब्रिफिङ्ग गर्न सक्छ । केहि ब्यबस्थित छैन अनि राज्य कसरि बिकसित हुन्छ ?
अन्तमा, घर जग्गा खरिद बिक्रि गर्न तपाईकै कम्पनीमा आउनु पर्ने कारणहरु के हुन ?
-हाम्रो कम्पनीले बेच्ने प्रोपर्टी कुनै बिबादास्पद र कानुनि झन्झट नभएको, स्पष्ट र बैधानिक कागजात सहित हुन्छ । हामीले ग्राहकलाई चर्को कमिसन खाने र महँगो मुल्यमा फसाउने नियत राख्दैन । सिरिप सरकारको कानुनले दिएको ३ देखि ५ प्रतिशत कमिसन ग्यारेन्टी गरेको हुन्छ । हामीले प्रोपर्टी काउन्सेलिङ्ग गर्दा त्यो एरियाको जग्गाको रिजनयबल मुल्य र घर बनाउने खर्च के कति अनुभबी वकिल र इन्जिनियर संग बसेर मात्र निर्धारण गर्छौ । मानौ त्यो घर बनाउन कुन रड, कुन डन्डी, कुन साइज, पिलर साइज, डेप्थ फाउन्डेसन कति फिट आदिको सबै काउन्सेलिङ्ग गरेर मात्र बैना र किनबेच गरिन्छ । हाम्रो सेवा आधुनिक र अन्तराष्ट्रिय स्तरले दिने भन्ने हाम्रो लक्ष्य हो । हाम्रो कम्पनीमा प्राय शिक्षित, देश विदेश घुमिसकेका ग्राहकहरु छिटो छरितो समयको महत्व बुझेकाहरुले प्रोपर्टी किन्छन ।